CSM : mpitsara 100 mahery no afindra toerana - ewa.mg
CSM : mpitsara 100 mahery no afindra toerana
News - CSM : mpitsara 100 mahery no afindra toerana
“Tsy hoe misy tsy mety
ny namindrana azy ireo fa amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa: mba
mahazo traikefa be dia be ireo mpitsara ary mifindrafindra toerana.
Tokony ho iray ny fomba fitsarana ka fanavaozana fahalalana ny
famindran-toerana. Mba tokony hiezaka hanana karazana fisondrotana
eo amin’ny asa koa ny sasany.” hoy ny minisitry ny Fitsarana,
Andriamahefarivo Johnny Richard, teny Faravohitra, tamin’ity
herinandro ity. Mpitsara miisa 100 mahery tamin’ny fanapahan’ny
fivorian’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM)
Manahirana rehefa ela
loatra amin’ny toerana iray
Tsy maintsy mandeha mba hitovy
fahalalana sy mitondra ny fahaizany any amin’ny faritra hafa ireo
ela loatra amin’ny toerana iray. Misy mpitsara mpamoaka didy,
mpitsara mpanao famotorana…
Natao hifandimbidimby toerana ny
mpiasam-panjakana. “Miezaka izahay mba tsy
hampaharitra an’izay satria maro ny kazarana fanakianana”, hoy
izy. Rehefa ela eo amin’ny toerana iray, manjary manana
fifandraisana manahirana: sahirana ny mpitsara, ny olona koa
L’article CSM : mpitsara 100 mahery no afindra toerana a été récupéré chez Newsmada.
Ankoatra ireo 233 izay nahitana soritr’aretina sy ireo voatily ho tena mitondra ny valanaretina ka efa samy sitrana soa aman-tsara, nambaran’ny komandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa zandary telo no efa lavon’ny covid-19.“Izahay zandary dia mitovy amin’ny olon-drehetra ary tena misy tokoa ny tratran’ny covid-19”, hoy ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa. Nisy tokoa, araka ny nambarany, ireo zandary nifindran’ny valanaretina co­vid-19, toy ny tany amin’ny sekolin’ny zandary ao Ambosi­tra sy ny sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena any Mo­ramanga. Ho an’ny tao Ambositra, zandary fito no vita fitiliana ka ny dimy amin’ireo no “positif” raha miisa 357 kosa ireo nisy fambara ho hafahafa, teo koa ny tsy naheno fofona. Araka ny fepetra, notsaboina avokoa izy ireo ka 233 no efa sitrana. Miisa 26 kosa no efa sitrana ho an’ny ao Moraman­ga. Miisa 98 kosa ireo zandary tratran’ny covid-19 tany amin’ny faritra hafa ka ny 36 amin’ireo efa sitrana avokoa”, raha ny nambaran’ny COMGN hatrany.“Tsy andeferana ireo minia manakorontana”Nasiany tsindrim-peo koa ny mikasika ny fepetra efa mipetraka amin’ny hamehana ara-pahasalamana. “Raha mbo­la misy ny fandikana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy manasazy ny zandarimariam-pirenena. Hatramin’izay na­nombohan’ny hetsika fanasaziana ny olona tsy mitondra arovava izay, nahatratra fito alina ny olona nosazina ka nampanaovina asa soa iombonana”, hoy izy. Nambarany fa misy ny hetsika ataon’ny fanjakana amin’ny fizarana ny sosialim-bahoaka. Misy sivy ny toeram-pizarana iandraiketan’ny zandarimariam-pirenena ka mahatratra 300 ny olona miasa amin’ireny toerana ireny, toy ny eny amin’ny kianja malalaka manakaiky ny ambasadin’i Etazonia, ny eny amin’ny Kianja Alasora. “Rehefa misy ny fitangoronana olona toy ireny, miseho ihany ny fahasarotana ny fandrindrana ny olona. Ny zavatra hita, misy olona manao fanahy iniana mandeha amin’ireny toerana ireny ary manana tanjona hanakorontana, hanao izay hisian’ny korontana. Mampi­tan­drina ireny olona ireny izahay. Ny fanjakana efa manao ny ezaka rehetra amin’ny fanampiana ny olona. Raha misy olona tratra dia tsy andeferana fa hoentina avy hatrany eny amin’ny fitsarana”, hoy hatrany izy.Tsy ny mpitandro filaminana no tokony hatahorana…Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony ity hatrany ny tokony hanajan’ny tsirairay avy ny fepetra napetraky ny fanjakana. “Aoka re mba tsy ny fahatahorana ny zandary na polisy na tafika no ametrahana ny arovavanao na hanajanao ny hetsika rehetra. Tsy ny mpitandro filaminana no tokony hatahorana fa tena anaovy ny arovava mba hiarovanao ny tenanao, ny mpiara-belona sy ny fianakavianao. Raha isika rehetra no samy mahavita mitandrina, azo antoka zato isan-jato fa ho resintsika ity valanaretina ity”, hoy izy. Ampiharina amin’izay tratra ny sazy sahaza azy.Jean ClaudeL’article 233 no sitrana soa aman-tsara…: Zandary am-perinasa telo no matin’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ny tenisy, ny FJKM, ny fifandraisan-davitra: nodimandry Rasolojaona Mamiharilala, rain’ny tenisy sy ny teknolojia nomerika
Lavo ny andrarezin’ny fanatanjahantena sy ny kanto malagasy. Nodimandry, teo amin’ny faha-68 taony, Rasolojaona Mamiharilala. Efa nitana andraikitra maro tamin’ny sehatra samihafa eto amin’ny firenena ny tenany.Hatairana ny an’ny rehetra nahita amin’ny tambajotran-tserasera sy naheno tamin’ny onjampeo RDJ, ny talata hariva lasa teo, fa nindaosin’ny fahafatesana Rasolojaona Mamiharilala. Efa filoha teo aloha ny federasiona malagasin’ny taranja tenisy, ny 2005 ka hatramin’ny 2010, izy. Nahavita be teto amin’ny firenena ary tsy teo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena ihany fa saika nametrahany ny dian-tanany avokoa ny sehatra rehetra.Nahalalana azy ny teo amin’ny resaka fifandraisan-davitra satria injeniera sady filohan’ny filankevi-pitantanana tao amin’ny Telma. Anisan’ireo nampiditra ny finday voalohany teto Madagasikara sy nampiroborobo izany, tamin’ny alalan’ny Nouvelle technologie de l’informartion et de la communication (NTIC). Efa nitana toerana ambony tao amin’ny Paositra malagasy ihany koa ary efa nitana ny toeran’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra, tamin’ny minisitra Andriamanjato Ny Hasina. Efa diplaomaty misahana ny iraka any ivelany eo anivon’ny masoivohon’i Madagasikara any Etazonia izy ny taona 2010. Zavatra nataony farany, nialoha izao fahafatesany izao, ny fananganana ny Consortium d’experts en économie numérique (C2EN), tamin’ny taon-dasa.Olon’ny kantoAnkoatra ny naha diplaomaty sy mpanao fanatanjahantena azy, olon’ny kanto ihany koa Rasolojaona Mamiharilala. Mpino eo anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM Anosipatrana) izy. Tsy kristianina tsotra fotsiny ihany fa namorona hira tao anaty fihirana fanampiny ka anisan’ireny ny “Voadiko”, laharana faha-25. Teo koa ireo hira evanjelika isan-karazany.Mpihira sady mpitendry zavamaneno ihany koa i Mamiharilala. Tena olona nilona tanteraka tao anatin’ny zavakanto izy. Porofon’izany ny namoronany ny onjampeo RDJ, tantanin’ny zanany, Rasolojaona Tahina (Jay Tax).Namela manano tena sy kamboty telo mianadahy Itompokolahy. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny tenisy ny gazety Taratra. Tompondaka L’article Misaona ny tenisy, ny FJKM, ny fifandraisan-davitra: nodimandry Rasolojaona Mamiharilala, rain’ny tenisy sy ny teknolojia nomerika a été récupéré chez Newsmada.